काम सुरु भएको ११ वर्षपछि माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएको छ । स्वदेशी लगानीको देशकै सबैभन्दा ठूलो चार सय ५६ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको उद्घाटनले धेरैलाई उत्साहित बताएको छ । पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ २०६८ सालमा उद्घाटन भएको आयोजना ११ वर्षपछि सम्पन्न भएको हो । आयोजनाको सुरुवाती लागत ३५ अर्ब तोकिए पनि अमेरिकी डलरको मूल्यमा आएको उतारचढाव, ब्याजलगायतका कारणले भने बढेर झन्डै ८० अर्ब रुपैयाँको हाराहारी पुगेको छ ।
माथिल्लो तामाकोसी मात्रै होइन देशका धेरै ठूला आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सक्दैनन्, लागत पनि दोब्बर दोब्बर हुन्छ, आयोजनाले लागत खर्च कटाएर प्रतिफल दिन वर्षाैँ कुर्नुपर्ने हुन्छ । तामाकोसीबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएसँगै ऊर्जा खपतको चिन्ता पनि थपिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले ऊर्जा खपत बढाउन कामै नगरेको गुनासा पनि छन् । जलविद्युत् क्षेत्रका विविध विषयमा अर्जुन पोख्रेलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग गरेको कुराकानी :
मैले प्राधिकरणका हरेक निर्णय र काम निकै चासो मानेर हेरिरहेको छु । नेपाली नागरिक र मैले प्राधिकरणको नयाँ नेतृत्वले जसरी काम गर्ला भने सोचेका थियौँ, त्यसरी काम भएको पटक्कै पाइएको छैन । नेतृत्वकर्ता त लामो समय विद्युत् प्राधिकरणमा काम गर्नुभएको, प्राधिकरण हाँक्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति नै हुनुहुन्छ तर उहाँले जसरी काम गर्नुपर्थ्यो त्यसरी काम भएको अनुभव मेलै गरेको छैन ।
केही काम त भएका छन् । तर रणनीतिक हिसाबले अघि बढ्नुपर्ने परियोजनाहरू, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सेवा ’स्मार्ट’ बनाउने योजना, लाइन अन्डरग्राउन्डका कुरा, स्मार्ट मिटर जडानदेखि राष्ट्रिय महत्त्वका ठूला र नयाँ आयोजनामा भने निकै ढिलाइ भएको छ । काम नै अघि बढाउन नसकेको देखिएको छ । प्राधिकरणलाई ’स्मार्ट’ बनाउने भनेर पाँच वर्षे कर्पोरेट डेभलपमेन्ट प्लान बनाएका थियौँ, त्यसलाई बोर्डबाट स्वीकृत गराएर अघि बढाएका थियौँ तर त्यो काम अहिले खासै अघि बढेको जस्तो लागेको छैन ।
यो आयोजनामा सबैभन्दा ठूलो क्षति भूकम्पले नै ग¥यो भूकम्पपछि यो आयोजना यति धेरै थिलथिलो भएको थियो कि धेरैले यसलाई उठाउन सकिन्छ भनेर सोच्नै सक्दैन थिए । म प्राधिकरणको कार्यकारी भएर गएपछि पनि धेरैले अब तामाकोसी उठ्दैन भनेका थिए । तर हाम्रो टिम निरन्तर लागिरह्यो, राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना जसरी पनि सम्पन्न गर्नैपर्छ भनेर कैयौँ योजना बनायौँ, सल्लाह लियौँ र फेरि काम सुरु भयो । यो निर्णयमा हाम्रो सञ्चालक समितिले पनि उत्तिकै साथ र सहयोग दियो र काम अघि बढ्यो ।
ठेक्का नै तोडिने अवस्थामा पुगेको परियोजनालाई हामीले धेरै विषयको सुझबुझपूर्ण काम ग¥यौँ र उत्पादनको चरणमा ल्यायौँ । म विद्युत् प्राधिकरणमा रहँदा नै यो आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा थियो तर कोभिडको कारण र भारतमा केही उपकरणको उत्पादनमा ढिलाइ हुँदा विद्युत् उत्पादनमा केही ढिलो भयो । तर अहिले पहिलो युनिटबाट भए पनि उत्पादन सुरु भएको छ । यो राष्ट्रिय गौरवको विषय हो ।
काम नभएको भए विद्युत् उत्पादन हुने थिएन, काम भएरै उत्पादन सुरु भयो । अहिले प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहनेदेखि सञ्चालक समिति, सचिव, मन्त्री र हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्म सबै बधाईका लागि योग्य हुनुहुन्छ । तर आयोजनाको ९९ प्रतिशतभन्दा धेरै काम गएको वर्षको साउनमै भएको थियो । जलविद्युत् आयोजनामा ९९ दशमलव ५ प्रतिशत काम भए पनि खासै काम देखिन्न । तर प्याट्ट स्विच अन गर्दा बिजुली बल्यो भने बल्ल सम्पन्न भएको मानिन्छ । माथिल्लो तामाकोसीमा पनि यसअघि भएका कुनै कामको पनि गणना नगर्ने अनि अहिले स्विच अन गर्ने कामलाई मात्रै महत्त्व दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । मैले अघि पनि भनेको छु, यो आयोजना सुरु हुँदादेखि अहिलेसम्मका सबै नेतृत्वले मेहनत गरेका छन् । यसमा सबैले गर्व गर्नुपर्छ ।
समय र लागतको ’इस्टिमेट’ गर्दा समय सान्दर्भिक र सुहाउँदो भयो कि भएन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । हामीले कुनै परियोजना पाँच वर्षमा सकिन्छ भनेर फ्याट्टै भनिदिन्छौँ तर त्यसको भौगोलिक अध्ययनदेखि कामको प्रकृति र भविष्यमा आउन सक्ने समस्यालाई ख्याल नै गरेका हुँदैनौँ । हाम्रोमा त एक हिसाबले अनुमानकै आधारमा समय तोकिदिने चलन छ । कुनै परियोजना चार वर्षमा सकिने छ भने लेख्ने बेलामा दुई वर्षमै सकिन्छ भनेर लेखिदिएको पनि देखियो ।
कन्सल्ट्यान्टले ५३ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलरको लागत अनुमान दिएकोमा प्राधिकरणले १० करोड डलर घटाएर ४३ करोड डलरमा झा¥यो, त्यो बेलाको डलरको मूल्य ८० रुपैयाँले हिसाब गर्दा तामाकोसीको लागत ३५ अर्ब रुपैयाँ उल्लेख गरियो ।
तामाकोसी ३५ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न हुँदैन भन्ने त त्यति बेला नै थाहा थियो नि ! अहिले कसैले नबुझे जस्तो गर्नु एउटा कुरा हो तर लागतका कुनै सिद्धान्त नै ’फलो’ नगरिकन तोकिएको ३५ अर्बमा आयोजना बन्दैन भन्ने सबैलाई थाहा थियो ।
मैले लागत बढ्नुपर्थ्यो, बढेर ठिक भयो, कतै पनि कमजोरी नै भएका छैनन् भनेको होइन । मैले त हामीकहाँ सुरुमा आयोजना सस्तोमा सम्पन्न हुने भयो भनेर हचुवाका भरमा लागत अनुमान गरिन्छ भन्न खोजेको हो । त्यति बेलाको व्यवस्थापनले परियोजना सस्तो देखाउनलाई ३५ अर्ब रुपैयाँ भनिदिए, जुन कुरा असम्भव थियो । आयोजना बुझेका कसैले पनि नेपाल जस्तो देशमा चार सय ५६ मेगावाटको आयोजना ३५ अर्ब रुपैयाँमा बन्छ भनेर पत्याउने कुरै थिएन तर त्यति बेला लेखिदिएछन्, अहिलेसम्मको व्यवस्थापनले भनाइ खानुपरेको छ । त्यतिखेरै कन्सल्ट्यान्टले दिएको सुझावअनुसार कम्तीमा ५५ देखि ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्छ भन्नुपर्थ्यो । भूकम्पले गरेको क्षति, नाकाबन्दी, आयोजनाले वरपर गरेका अन्य विकास निर्माण लगायतका खर्च पनि त्यति बेला अनुमान गरिएको थिएन ।
अहिले दुई सय १६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ’एक’ को लागत कोरियनहरूले ६० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरेका छन् । यो आयोजनाको लागत ३५ अर्ब नै भन्न पनि सक्थे तर उनीहरूले परिपक्व अनुमान गर्दै सम्भावित जोखिम, डलरको भाउ, महँगी, कर्मचारीको तलबलगायतका विषय समावेश गरेर ६० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरेका छन् । यो आयोजनामा अनुमान गरिएभन्दा दुई÷चार अर्ब रुपैयाँबाहेक तल–माथि हुँदैन होला सायद ।
अहिलेको अवस्था हेर्दा तामाकोसीको खपत नेपालमै हुन्छ र हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई । वर्षायाममा पनि पोहोरको भन्दा २० प्रतिशत धेरै माग रहेको छ, बाढी–पहिरोका कारण विभिन्न आयोजनाका उत्पादन बन्द गर्नुपर्ने अवस्था हरेक वर्ष दोहोरिरहन्छ । उद्योग कलकारखाना पनि बढेका छन् । हामीले दुई वर्षअघि स्वीकृति दिएका उद्योग बल्ल खुलेका छन्, माग बढिरहेको छ, त्यसैले तामाकोसीको बिजुली नेपालमै खपत हुन्छ भन्ने लाग्छ । तर निजी क्षेत्रले बनाइरहेका र प्राधिकरणले बनाएका केही परियोजनाको काम अन्तिम–अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अर्को वर्षदेखि बर्खामा चाहिँ धेरै नै बिजुली खेर जाने अवस्था आउन सक्ने सम्भावना छ, यसका लागि बिक्रीको तयारी अहिलेदेखि नै गर्नुपर्छ ।
विद्युत् उत्पादन र उद्योग कलकारखाना खुल्ने क्रम हेर्दा बिजुली नै धेरै हुने देखिन्छ ।भारतसँग विद्युत् खरिद÷बिक्रीका अनेक सम्झौता त भएका छन् तर भारतको मनसाय हेर्दा किन्न मान्दैन कि भन्ने शङ्का पनि छ । यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिएला ?
भारतलाई बिजुली बेच्ने विषय सम्भव होइन, भारतसँग यो विषयमा सम्झौता भइसकेको छ । तर हामीले कत्तिको फलोअप गरिरहेका छौँ भन्ने विषयले फरक पार्छ । लामो समयदेखिको प्रयासपछि हामीले अहिले भारतको खुला बजारबाट प्रतिस्पर्धी भाउमा बिजुली किन्न पाएका छौँ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, सबस्टेशन, कुटनीतिक सक्रियता जस्ता विषयमा हामीले फटाफट निर्णय र काम गर्न सक्यौँ भने भारतले बिजुली किन्दैन भन्ने मलाई लाग्दैन । हामीले कति धेरै संवाद र भेटवार्ता गरेर बिजुली खरिद÷बिक्रीका प्रावधानलाई सहज बनाएका छौँ ।
अहिलेको प्राधिकरणको नेतृत्वले भारतको मन्त्रालय, विभाग हुँदै साना–साना निकायसँग सीधा सम्पर्क गर्नुपर्छ । हामीले पहल नगरेसम्म भारतले बिजुली किन्दैन भन्ने कुरा त व्यवस्थापनले बुझेकै होला । नेपाली नागरिकको लगानीमा बनेका आयोजनाको बिजुली भारतले किन्दैन होला भनेर डराएर बस्नुको साटो हामीले पटक–पटक भारतसँग संवाद गर्ने र दबाब दिने कोसिस गर्नुपर्छ । प्राधिकरणको यो नेतृत्वको ध्यान त्यतातिर कम भएको जस्तो लागेको छ मलाई । साभार : उज्यालो अनलाइन